Beche pamagirosa musi wa24 ….. ndichibva joni – VanodaZvinhu
by DrSviro · July 3, 2015
Aaaah hrrrr yohwe mmnnmmm ndakaipfekera ….waingonzwa kuti bvuu bvuu bvuu kuita sekamunyati kano unblocker matoireti….uku supu yebeche yaiyerera kunge icecream yecorn yatengerwa chana chekucreche. Ko inodyiwa ichitarirwa kaaa uchichengetiwa. Kuti inonoke kupera , ko kuita kwepwere.
Mweya waibuda muchimbuzi chepit latrin…mainhuwa kunge makarasirwa imbwa yakafa.asi pfungwa dzainge dzarohwa mbira dzakondo nekunakirwa nebeche…mwana achemerera iyeye ini ndichingopomba nepombi yangu. NB. Yaive nyoro mupositori wekwamarange.
Ok 23 ndakasimuka pretoria kuri kumanyira kunofara nevamwe… zvino munongozivawo kuti munzira hamufambiki mapurisa dzinenge dziri mhamhase svosve rinodya marasha so ndakatozosvika masvingo kwave late, yatove 24.
Ndakazosvetukira rimwe bhazi tangoti fambe ndiye gojo kufa apa usiku..takambotanga tichatarisira makanika tikaona kuti kuvharwa kurindira beche rakawora.saka vamwe vanhu vakangowaya waya ini ndakabva ndaona vamwe sisi vaive vakarungana zviri pakati nepakati, apa vaiva vachiratidzika kuva lonely so much.
Vaive bhiza vari vashava pachiso. Maziso avo aive sexy thou aita kunge edafi… mhino yavo yaive yakarungana nenzveve dzaiita kunge matinji…miromo yacho waingoyemura wakatarisa kuita kunge foundation yemhata.. haaa tingapedze nguva.
So ndakavati since bhazi ranzwa usimbe ngatitwasanurei makumbo tichienda pa the nearest shops. Aaaaaah muromo umwe ini nechemumoyo ndikati dzawira mubeche zvoda kukoira chete…nyaya dzakatsva ndokuona aaaaah tapamagrosa.
We bought some drinks muka bar kainge kakanzi sengejira bar ndokunwa …akabva anditi bby chaandeyi I dnt like this place…izvi zvakandishamisa sekuona beche rehanzvadzi..ndakati ok handei ..we just walked for 53, 7metres ndakabva ndamubata zvine simba ndokumukisa..zviya zvechibharanzi haaaa iwe ndakamutsvoda zvekufour minutes.
Akange zvino oita kunge munhu ane asthma nekuti mvura dzainge dza high…ndakamubata ruoko ndichinanga kuzvitoireti zvaive kurima rekuti chana hachaimbobvuma ukachituma kunotora tsotso…tichisvika handina kuzombobata beche kana kudiii ndakamuvhomora tom bhobho.
Tom bhobho ange akurwadza achibuda twumvura ndakangofukura skirt ndokuisa kanduwe padivi ndiye pfeeeeeeeee …zvikanzi yuwiiii ndokubva ndatanga kukoira apa ndaita zvekubaya twumukoko twose.. ndainge ndajaira mapeche emvana ne emahure saka iri rakandinakira coz ange asati azvara.
Mmmmm mai kani aaaaaaaah aaaaaaaaah ndichitsemura nyini ndakazongonzwa achihuta nekachisuri kaidziya nekunhuwa kachifuridza choya changu kachiita kunge mweya ukubuda mucondom rafuridzwa… ndaziva kuti atunda apa beche rakawedzera kunaka ndakadhonzwa dhonzwa mboro ndobva ndatunda pakarepo ndokuisa mbeu yangu mukati mukanwa mazara mate ndakungopfira .
Ndakazoivhomora mbichana mbichana yakurema kunge yasungirirwa sando …haaa varume kutaurirwa hunyimwa now ndoda kutoita ari mavideo chaiwo nekuti mmmmmmm zvemusi uyu.
Short Story : Mvola yeDhara KUNAKA!
by DrSviro · Published November 5, 2015
Next story Ndakazoiwana Pain Killer yakandipedza nyota: A Lady’s version
Previous story Kusejuswa kwandakaitwa nekababie ka muIndian, ndobva ndakakwesha!